वायु प्रदुषणले नैतिकतालाई प्रदुषित पार्छ ! | गृहपृष्ठ
Home रेस्टुँरा रिभ्यू विविध वायु प्रदुषणले नैतिकतालाई प्रदुषित पार्छ !
विविध, समाचार4views
माघ २९, काठमाडौं (अस) । पछिल्लो समय विश्वको प्रायजसो सबै ठाउँ वायु प्रदषणको उच्च जोखिममा रहेको छ । यसले हामी सबैको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याइरहेको त हामी सबैलाई थाहै छ र यो हामी सबैले भोग्दै पनि आएका छौं ।
तर वायु प्रदुषणको सम्पर्कमा धेरै आउँदा यसले नैतिकतालाई पनि प्रदुषित पार्न सक्ने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । एशोसिएशन फर साइकोलोजिकल साइन्स जर्नल ‘साइकोलोजिकल साइन्स’को पछिल्लो संस्करणमा छापिएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
प्रदुषणसँगको सम्पर्कमा आउने मात्र नभई यसको कल्पना मात्र गर्दा पनि मानिसमा अनैतिक आचरण बढ्ने अध्यनयमा भनिएको छ । अभिलेखिय र प्रयोगात्मक अध्ययन गरेर तयार पारिएको यस प्रतिवेदनअनुसार, चाहे भौतिक रुपमा होस् चाहे मानसिक रुपमा, जुनसुकै रुपमा पनि वायु प्रदुषणसँगको सम्पर्कमा आउँदा यसले अपराध र ठगीजस्तो अनैतिक व्यवहार बढाउन सक्छ ।
वायु प्रदुषणले स्वास्थ्य र वातावरणभन्दा बाहेकका क्षेत्रलाई पनि असर गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको यस प्रतिवेदनका लेखक तथा कोलम्बिया विजनेश स्कूलका व्यवहारिक वैज्ञानिक ज्याक्सन जी लुले बताएका छन् । वायु प्रदुषण विश्वकै एक गम्भिर मामिला भएको र यसले अरबौं मानिसलाई प्रभावित पारेकोमा जोड दिँदै लुले अमेरिकाजस्तो विकसित राष्ट्र पनि यसबाट अछुतो रहन नसकेको उल्लेख गरे । करीब १४ करोड २० लाख मानिस अझै पनि चरम वायु प्रदुषण हुने राष्ट्रमा बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यसअघि भएका अध्ययनहरुले वायु प्रदृषणले व्यक्तिको उत्सुकतालाई बढाउने कुराहरु देखाएको थियो । उत्सुकता र केही अनैतिक व्यवहारहरु एक आपसमा सम्बन्धित हुने गरेको मानिँदै आइएको छ । वायु प्रदुषणले उत्सकुतालाई बढाएर आपराधिक गतिविधि र अनैतिक व्यवहारलाई बढावा दिने लु र उनका सहकर्मिले परिकल्पना गरेका छन् ।
यसका लागि अनुसन्धानकर्ताहरुले ९ हजार ३ सय ६० ओटा अमेरिकी शहरमा ९ वर्षको अवधिमा सङ्कलन भएका वायु प्रदुषण र आपराधिक तथ्याङ्कको अध्ययन गरेका थिए । वायु प्रदुषण धेरै भएको शहरमा आपराधिक गतिविधिले समेत बढावा पाएको अनुसन्धानमा पाइयो । त्यस्तै अर्को एक प्रयोगमा २ सय ५६ जना सहभागिलाई प्रदुषित र स्वच्छ तस्वीर हेर्न लगाइयो । उनीहरुले आफूलाई त्यहि स्थानमा बसिरहेको कल्पना गरे ।
आफू प्रदुषित क्षेत्रमा बसिरहेको कल्पना गरेका सहभागिको अनैतिक व्यवहार स्वच्छ क्षेत्रमा बसेको कल्पना गर्ने सहभागिको तुलनामा बढेको पाइयो । तर वायु प्रदुषण र अनैतिक व्यवहारलाई एकअर्कासँग जोड्ने उत्सुकता बाहेक अन्य तत्व पनि हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । यसका लागि थप अध्ययन गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
वायु प्रदुषणले मानिसको स्वास्थ्यलाई असर पार्ने मात्र नभई यसले उसको नैतिकतालाई पनि धूमिल बनाउने अध्ययनले सुझाएको अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । रासस/पीटीआई